Su Myat Noe, Author at Chelmo News Portal - Page2of 5
Home›Author: Su Myat Noe (Page 2)
ကိုဗစ်ကာလကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အခုလို အချိန်မှာ ဈေးဆိုင်တွေ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေ နဲ့ Beauty Salon တွေလည်း ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ ဆံပင်ညှပ်ချင်သူတွေ၊ အလှပြင်ချင်သူတွေ၊ ခြေသည်းလက်သည်း လှီးချင်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အချိန်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ Quarantine လုပ်နေသူတွေက မိသားစုဝင် အချင်းချင်း ...
မံမီရုပ်တု ဆိုတာ အီဂျစ်နိုင်ငံတွေမှာပဲ တွေ့ရတတ်တယ်လို့ လူအများ သိထားကြတာပါ။ အဲဒီ့ မံမီရုပ်အလောင်းတွေ ဆိုတာဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပဲ လုပ်ကြတာမို့ မထူးခြားလှဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မံမီရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ မတူဘဲ ကွဲပြားစွာပြုလုပ်ထားတာကို ဖူးမြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးဟာ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Fujian ပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ကာ၊ အသက်၁၃ နှစ်မှစကာ သာသနာဘောင်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ...
“ဒေါသမရှိဘူးတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ရှိတာပေါ့ ရှိပေမယ့်လည်း ဒီဒေါသကို ထုတ်မပြနိုင်တာက ပညာပဲ” “မခံစားရဘူးတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ခံစားရတာပေါ့ ခံစားရပေမယ့်လည်း မျက်နှာမှာ မပေါ်လွင်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်တာက ပညာပဲ” “ဝမ်းမနည်းတတ်တာတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ဝမ်းနည်းတတ်တာပေါ့ ဝမ်းနည်းပေမယ့်လည်း လူတကာကို လှပ်ပြပြီးပြောပြမနေတော့တာက ပညာပဲ” လူပဲ ခံစားချက်ကတော့ အသက်ရှင်နေသ၍ ရှိနေဦးမှာပဲ… ...
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Chelmo ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ထူးထူးခြားခြား သေဆုံးခဲ့သူ အချို့ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ BC 620 က ဂရိနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူ Draco ဟာ တစ်ရက်မှာ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေက လက်ဆောင် အဖြစ် ဝက်ရုံတွေ၊ ဦးထုပ်တွေနဲ့ ပစ်ပေါက်အားပေးကြရင်း အဲဒီပစ္စည်းတွေပိပြီး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ...
10. Taylor Swift: 133.3 million followers View this post on Instagram Cat lady thirst trap A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jul 13, 2019 ...
မြန်မာပြည်က Kpop ဝါသနာရှင်လေးတွေ အတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုလာပါပြီ။ ဒါကတော့ SM Entertainment က ဝါသနာရှင်လေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ လျောက်လွှာတွေကို စတင်ယူနေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ကိုယ်က KPOP industry ထဲဝင်ပြီး Idol တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအခွင့်အရေးကို လုံး၀ လက်လွှတ်မခံသင့်ပါဘူး။ အားလုံးသိကြတဲ့ ...
ပင်ပန်းရင် ရေသွားကူးပါ။ အရမ်း ပင်ပန်းလာရင် အားလုံးကို လွတ်ချပြီး ရေကူးကန်ကောင်းကောင်းလေးမှာ အနားယူလိုက်ရတာက တကယ့် feelပါ။ ဘေးက သောက်စရာလေး တစ်ခွက် နှစ်ခွက် ပါမယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်ပြောစရာ လိုမလဲနော်။ ဒါကြောင့် ရေကူးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ တစ်ချို့ ကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ...
ကိုရီးယားက Oppa တွေရဲ့ ငယ်ဘ၀ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်… ကိုရီးယားက Oppa ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မဒီလေးတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ငယ်ဘဝက ပုံရိပ်လေးတွေကို မြင်ဖူးချင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်မင်က သူတို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်… (1) LEE MIN HO ...
“အရပ်ရှည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက အွန်လိုင်းမှာ အမေးများပါတယ်။ သေချာတွက်ကြည့်ရင် အရပ်ရှည်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေ များများစားစား မရှိပါဘူး။ အရပ်ရှည်ဖို့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို အဓိကထားပြီး ပြောင်းလဲပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အနေနဲ့ အရပ်ရှည်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်… အရပ်ရှည်ဖို့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်က ပရိုတင်းဓာတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ...
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြတယ် ကြိုက်ကြတယ် သံယောဇဉ်ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာ ရှေးရေစက် အတိတ်ကံ ဖန်လာလို့ပဲ မဟုတ်လား ? ကိုယ်သိပ်ချစ်ရသူရဲ့ မျက်နှာကလေး မြင်လိုက်ရရင် ပျော်ရွှင်ရသလို ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူရဲ့ အသံကလေး ကြားလိုက်ရရင်လည်း ကြည်နူးကြရတယ်။ ဒါဟာလည်း စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲစွာနှစ် ချစ်မိသူတိုင်း ဖြစ်ရတာတွေပါ။ အခြေအနေ ...